विश्वकै अचम्मको शहरः जहाँ जुम्ल्याहा मात्र जन्मिन्छन तर किन ? « News24 : Premium News Channel
विश्वकै अचम्मको शहरः जहाँ जुम्ल्याहा मात्र जन्मिन्छन तर किन ?
एजेन्सी, ४ असोज । दक्षिणी ब्राजिलको क्यान्डिडो गोड्वाई शहर टुइन ल्याण्डको रुपमा समेत प्रख्यात छ । सात हजार मानिसको बसोवास रहेको यो सानो शहरमा ७० भन्दा बढी जुम्ल्याहाहरु रहेका छन् जुन विश्वको औसत दरको तुलनामा अत्यधिक बढी हो । दक्षिणी ब्राजिलको ग्रामीण इलाकामा रहेको क्यान्डिडो गोड्वाई शहरमा जुम्ल्याहाहरूको जन्मदर उच्च छ ।
ब्राजिलको यो शहरमा जुम्ल्याहाहरू जन्मिनु सामान्य विषय बनेको छ । तर कारण भने अझ्mसम्म कसैलाई थाहा छैन । घरछिमेक, विद्यालय जहाँत्यही जुम्ल्याहाहरू हुने गरेकाले त्यहाँका बालबालिकालाई पनि जुम्ल्याहा देख्दा अनौठौ लाग्दैन । क्यान्डिडो गोड्वाई विश्वमै जुम्ल्याहाको संख्या उच्च भएको शहर हो । यहाँका शिक्षकहरु सधै आफ्ना जुम्ल्याहा विद्यार्थीबीच झुक्किने गर्दछन् भने कतिपय आफ्ना प्रेमीबीच झुक्किने गरेका छन् ।
यहाँ जुम्ल्याहाको जन्मदर राष्ट्रिय औसतभन्दा दशगुणा बढी रहेको बताइएको छ । सामान्यतयाः ८० मा एक जुम्ल्याहा जन्मिने गरेकोमा यहाँ पाँचमा एक जुम्ल्याहा जन्मिने गरेको छ । यसको वैज्ञानिक कारण भने खोजिँदैछ । यहाँका स्थानीयहरु भने पानीमा अनौठो तत्व भएकोले गर्दा जुम्ल्याहा जन्मिने गरेको विश्वास गर्छन् ।
नाजी युद्धका अपराधी डा. योजेफ मेग्गले सन् १९६० को दशकमा यहाँ आएको र उनले यहाँको श्रमशिविरमा जुम्ल्याहामाथि विभिन्न अनुसन्धान गरेको दावी छ । यहाँ धेरै जुम्ल्याहा जन्मिनुका कारण पत्ता लगाउने आशामा वैज्ञानिकहरुले लागेका छन् । तर अहिलेसम्म यो विचित्र घटनाको रहस्य भने कायम नै छ ।